Ny Fivarotana Zava-manitra teo Amin’ny Tantaran’i Indonezia
TENA nampandroso ny toe-karena eran-tany ny fivarotana zava-manitra, tamin’ny taona 1500 tany ho any, tsy misy hafa amin’ny fivarotana solika tsy voadio ankehitriny. Lafo vidy be, ohatra, ny mioskady sy ny jirofo rehefa tonga tany Eoropa. Tao amin’ireo Nosin’ny Zava-manitra teto Indonezia no nakana azy ireny, izany hoe tao Maluku sy Maluku Avaratra.
Samy nitady fomba hahatongavana tao amin’ireo nosy ireo ny mpikaroka tany vaovao, toa an’i Christophe Colomb, Vasco de Gama, Fernand de Magellan, Samuel de Champlain, ary Henry Hudson. Izany no nahatonga ny olona hahafantatra tsara ny sarintanin’izao tontolo izao.